Chinese Visitors Surge After Visa Relaxation | Myanmar Business Today
Home Business Local Chinese Visitors Surge After Visa Relaxation
Myanmar last year relaxed visa requirements for visitors from China, Japan, South Korea and Macao, allowing these nationals to obtain visa-on-arrival at international airports across the country. The change resulted ina35 percent increase in air travel into the country andasurge in the number tourists entering on visa-on-arrival to 532,327.
Chinese nationals entering Myanmar on visa-on-arrival numbered 452,319,a152 percent increase over the previous year. However, the coronavirus outbreak, occurring during the Chinese Lunar New Year travel season, has putadamper on this growth.
Asanewly opened country with tourism as one of its growth drivers, Myanmar is making efforts to attract more tourists.
The Ministry of Hotels and Tourism, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Labour, Immigration and Population are collaborating to facilitate tourist visits.
Most visitors to Myanmar are from Asian countries, with the largest numbers coming from Thailand, Japan and South Korea.
လေကြောင်းမှတဆင့် ဝင်ရောက်သည့် တရုတ်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယားနှင့်မကာ အိုနိုင်ငံများမှ ခရီးသွားများကို ဆိုက်ရောက် ဗီဇာဖြင့် ခရီးသွားဝင်ရောက်မှု ခွင့်ပြုထားရာ ၂ဝ၁၉ တစ်နှစ်လုံး (ဗီဇာဖြင့်လာရောက် သည့်) ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုသည် ၂ဝ၁၈ ကထက် ခရီးသွားဝင်ရောက်မှု ၃၈ ရာခိုင်နှုန်း (၅၃၂၃၂၇ ထိ) တိုးတက်လာသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသားခရီးသွားဝင်ရောက်မှု သည် အများဆုံး ဝင်ရောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ကထက် ၄၅၂၃၁၉ ဦးရေ(၁၅၂ ရာခိုင်နှုန်း) ပိုမိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။ လက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့မှ စတင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ရောဂါကြောင့် မြန်မာအပါအဝင်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ များရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်ပြီး ရောဂါမပြန့်ပွားစေရေး နိုင်ငံတကာဝင်ပေါက် ထွက်ပေါက်များကို ပိုမိုကြပ်မတ်လာကြ သည်။ ယင်းရောဂါပျံနှံ့လာသည့် ကာလ သည်တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကာလဖြစ်သည့် အတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုအထိ နာစေခဲ့သည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ဒေသတစ်ခု ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် အရေးပါသော လုပ်ငန်းတစ် ခုဖြစ်သည့်အတွက် အာဆီယံဒေသတွင်း နိုင်ငံများသာမက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကပါ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ခရီးသွားဧည့်သည်များကို ဆွဲဆောင်မှုရှိ၍ ပိုမိုဝင်ရောက်လာစေရေးအတွက် ထိရောက် သော အစီအမံများ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း ခရီးသွားဧည့် သည်များ ပိုမိုအဆင်ပြေဝင်ရောက်လည်ပတ် နိုင်ရေးအတွက်လည်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား လာရေး ဝန်ကြီးဌာန ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ အလုပ်သမား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတို့ဖြင့် ပေါင်း စပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ကရင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီး ဒေါ်နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုးက ပြောသည်။
Previous articleEverything You Should Know About The New Coronavirus Outbreak
Next articleOnline Investment Application Scheme in the Works